गर्भनिरोधक चक्की सेवनको तालिका छुटेमा के हुन्छ ? – Sanchar Patrika
August 5, 2020 252
आ’पतकालिन र गर्भनिरोधक चक्कीमा के फरक छ ?
धेरैजसो महिला यसमा द्विविधाग्रस्त हुन्छन् । कन्ट्रसेप्टिव पिल त्यो हो जसलाई तपाईं आफ्नो महिना अनुसार सेवन गर्नुहुन्छ । यद्यपि जसले कुनै सुरक्षा विधी नअपनाई यौ’न सम्बन्ध बनाउन पुग्छन् उनीहरु संभावित गर्भबाट बच्नका लागि चक्की दिइन्छ, जसलाई आपतकालिन चक्की भनिन्छ ।
यदि तपाईंले मिड प्याकलाई बिचमा छाडिदिनुभयो भने वा चक्की सेवन गर्न भुल्नुभयो भने यसले महिनावरी चक्र पनि बिग्रन्छ जुन सामान्य हुनमा निकै समय लाग्छ । किनभने यसले ओभ्युलेसन चक्रलाई कन्ट्रोल र प्रोटेक्ट गर्छ । यसैले चक्की लिइएन भने ओभ्युलेसनमा असर पर्छ, जसले अन्डा ओभरीजबाट बाहिर निक्लन सक्छ । साथै यसबाट हल्का र’क्तश्राव पनि हुनसक्छ ।
जब महिला प्रेग्नेन्सीका लागि पूर्ण रुपले तयार हुन्छन् तब यो चक्कीलाई बिचमा सेवन गर्न बन्द गर्न सक्नुहुनछ । चक्की सेवन गर्न छाडेपछि मासिक स्राव र ओभ्युलेशन चक्त सामान्य हुनमा थोरै समय लाग्छ । यसका साथै अचानक बीचमा छाड्दा मुड स्विङ, कपाल पातलो हुने जस्ता स’मस्या आउन सक्छ । यस्तो भएमा चिकित्सकसँग परामर्श गर्नुपर्छ ।
अब कुरा आउँछ कि यो चक्कि नियमित रुपमा सेवन गरिरहनुभएको छ । यौन क्रियाकलापमा पनि संलग्न भइरहनुभएको छ । गर्भवती हुन चाहनुहुन्न । यद्यपि भुलेर कुनै दिन तपाईंले यो चक्की लिन भुल्नुभयो । जतिबेला सम्झनुहुन्छ तत्काल अर्थात चाडो भन्दा चाडो चक्की सेवन गर्नुहोस् । जति चाडो गर्नुहुन्छ, ख’तरा उतिनै कम हुन्छ ।
Prevहरेक दिन बिहान गुर्जोको रस पिएँ ९ दिनमै को’रोना जितेका एसपीको फर्मुला–
Nextराति ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म हिँडडुल गर्न रोक
धुलिखेल अस्पतालबाट आयो !अर्को दुः’खद खबर
आफ्नो दुख अरुलाई सुनाउँदैनन् यी राशि हुनेहरु, जति पिडा भएपनि सहेरै बस्छन्